> Resource> Video> Olee otú Mee AVI Files Nta
Audio Video Input (makwaara dị ka AVI) bụ a faịlụ Ọkpụkpọ eji maka na ịchekwa songs na obere vidiyo. Àgwà nke AVI video dị nnọọ mma ma faịlụ mgbe niile na-ewe otutu siri ike mbanye ohere. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji chekwaa ndị a video faịlụ na PC ma ọ bụ na-ekiri ha na a mbadamba nkume ma ọ smartphone, gị mkpa n'ezie na-eme ka AVI faịlụ nta.
Iji nyere gị aka mfe ime AVI faịlụ nta, Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac) bụ maa ihe dị gị mkpa. Ekele na kensinammuo ọrụ interface, ọ bụ n'ezie mfe na-eji, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ọhụrụ ka video nhazi. Ọzọkwa, ị nwere ike họrọ otu n'ime ndị njikere mere presets maka iPad, iPod, iPhone, Sony PSP, Xbox 360, smartphones (gụnyere Android ekwentị mkpanaaka na), mbadamba, na multimedia egwuregwu. Ugbu a na-agbaso dị mfe ntụziaka n'okpuru ịmụta otú ka AVI nta na atọ mfe nzọụkwụ:
1 mbubata gị video faịlụ
Wụnye na-agba ọsọ a video Ntụgharị. Wee pịa "Tinye Files" button na center nke usoro ihe omume interface imeghe Add File dialog window. Họrọ otu ma ọ bụ karịa video faịlụ na pịa "Open". Ma ọ bụ i nwere ike na-ịdọrọ na dobe faịlụ gị ka usoro ihe omume.
2 Gbanwee video ntọala na-eme ka AVI faịlụ nta
Wee pịa "Mwube" bọtịnụ na ala nri akuku nke usoro ihe omume. Na mmapụta elu window, ị nwere ike iji aka ịgbanwe mmepụta parameters site na ịpị akụ n'akụkụ kọlụm ịhọrọ site na ndọpụta ndepụta. Rịba ama na ndị size na àgwà nke mmepụta video kpebisiri ike na site bitrate uru: ndị dị elu nke bitrate, mma àgwà na ibu ndị video faịlụ size. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ iji belata nkiri file size, i kwesịrị ibelata ya bitrate.
Iji nyere gị aka ime ka AVI nta ozugbo, ị nwere ike ịhọrọ "Obere Size" nhọrọ. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga na-akpaghị aka belata size nke AVI.
Mgbe n'ịgbanwe video ntọala, see OK na ị ga na-aga azụ isi interface. Mgbe ahụ ị pụrụ mara na video size-aghọ nta tụnyere ndị mbụ otu.
3 ịzọpụta ọhụrụ AVI video
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ma na-mbụ video format ma ọ bụ tọghata ya ọzọ format site na ịpị format oyiyi na n'akụkụ aka nri nke isi window. Na-amalite video akakabarede usoro, pịa "tọghata" button na ala nri akuku. Mgbe akakabarede zuru ezu, pịa "Open nchekwa" button na nchekwa nke nwere converted video ga-emeghe.
Olee otú iji belata hà MOV
Ekiri Videos on Mobile Devices (iOS & Android)
Nweta Best Dvdfab Alternative na OS X Mavericks
Olee otú Download Comedy Central Videos na a Click